သားငယ်ထက် ဘီလီတော်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် ဘီလီက သားငယ်ကို ဘာကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ ထွက်ပေါ် - APANNPYAY
Home / Myanmar Idol / သားငယ်ထက် ဘီလီတော်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် ဘီလီက သားငယ်ကို ဘာကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ ထွက်ပေါ်
သားငယ်ထက် ဘီလီတော်ခဲ့တာ မှန်ပေမယ့် ဘီလီက သားငယ်ကို ဘာကြောင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေ ထွက်ပေါ်
Apann Pyay 2:32 PM Myanmar Idol Edit
ဘီလီမရပဲ သားငယ်​ ဘာလို့ရလဲ သားငယ်​က ပရိတ်​သတ်​ချစ်​ခင်​မှု အများကြီးရထားလို့ပဲ…။ အမှန်​တို င်း​ပြောရရင်​ သားငယ်​ထက်​ ဘီလီအများကြီးသာခဲ့တယ်​..။
ဒါ​ပေမဲ့… ပရိတ်​သတ်​က ဒီပွဲတပွဲတည်းကြည့်​ခဲ့တဲ့သူ​တွေမှ မဟုတ်​တာ.. ပြီး​တော့ သားငယ်​ဆိုတာ တကြိမ်​မှ Bottom မထိုင်​ခဲ့ရဖူးဘူး ပြီး​တော့…. ပရိတ်​သတ်​ မျက်​စိဆံပင်​​မွှေးစူး​စေမဲ့ပုံစံ မလုပ်​ခဲ့ဘူး….။
ဘီလီက​တော့… ဇင်​ကြီး နဲ့ တုန်းကတစ်​ခါ ဇင်​ကြီးနှုတိဆက်​တာကိုအ​ရေးမစိုက်​ပဲ လှည့်​ထွက်​သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်​သွားခဲ့တယ်​ ပိုးမီ နဲ့တစ်​ခါ… ရှုံးတဲ့သူကိုနှစ်​သိမ့်​မှုမ​ပေးပဲ အ​ပျော်​ကြီး​ပျော်​ပြီး ပိုးမီးကိုနစ်​သိမ့်​ရမှာထက်​ ​ကျော်​ထက်​​အောင်​နဲ့မိုး မမြ င်​​လေမမြင်​ အောင်​ပွဲခံတဲ့ပုံစံဖြစ်​သွားခဲ့ပြန်​တယ်​….။
အဲ့ဒီမှာပဲ.. ဇင်​ကြီး ရဲ့ ဖန်​​တွေ ပိုးမီ ရဲ့ ဖန်​​တွေဟာ… သားငယ်​ဖက်​​ရောက်​သွားတယ်​….။
ပြီး​တော့ ဘီလီပုံစံ…. ပရိတ်​သတ်​ ​တော်​​တော်​များများဟာ သူ့မျက်​နာ​ပေးကို လုံးဝသ​ဘောမကျကြဘူး Bottom ထိုင်​ရရင်​ပိုသိသာတယ်​…။
တခြားသူ​တွေက ခံစားချက်​​နောက်​မလိုက်​ပဲ ထိန်းထားနိုင်​​ပေမဲ့… သူက မျက်​စိပျက်​မျက်​နှာပျက်​နဲ့ သူထွက်​ရမှာစိုး ရိ မ်​​နေတဲ့ပုံစံ​ပေါက်​​နေတာ ပြီး​တော့… သူမထွက်​ရရင်​ ပြိုင်​ဖက်​ကိုနစ်​သိမ့်​ရမှာထက်​ ပြိုင်​ဘက်​ကို လျစ်​လျူရှု တာ​တွေ များလာ​တော့ ပရိတ်​သတ်​ ​တော်​​တော်​များများ သတိထားမိလာတာပါ…။
အနုပညာရှင်​​ဆိုတာ ငါ​တော်​လို့ပရိတ်​သတ်​အား​ပေတားဆိုတဲ့ စိတ်​ကြီးဝင်​လာပြီး… ပရိတ်​သတ်​အား​ပေးလို့ ငါဒီ​နေ ရာ​ရောက်​တာ ကို​မေ့သွာရင်​… ကျဆုံးဖို့များပါတယ်​…။
အနုပညာရှင်​​ဘယ်​​လောက်​​တော်​​တော်​ ပရိတ်​သတ်​ သ​ဘောမကျတဲ့လုပ်​ရပ်​လုပ်​ရင်​ သူ​တော်​တာပရိတ်​သတ်​လက်​ခံ လိမ့်​မယ်​ အား​ပေးမှာမဟုတ်​ပါဘူး….။
Credit to Kyaw Kyaw
ဘီလီမရပဲ သားငယျ​ ဘာလို့ရလဲ သားငယျ​က ပရိတျ​သတျ​ခဈြ​ခငျ​မှု အမြားကွီးရထားလို့ပဲ…။ မ​နညေ့ကပှဲမှာ အမှနျ​တို ငျး​ပွောရရငျ​ သားငယျ​ထကျ​ ဘီလီအမြားကွီးသာခဲ့တယျ​..။ဒါ​ပမေဲ့… ပရိတျ​သတျ​က ဒီပှဲတပှဲတညျးကွညျ့​ခဲ့တဲ့သူ​တှမှေ မဟုတျ​တာ.. ပွီး​တော့ သားငယျ​ဆိုတာ တကွိမျ​မှ Bottom မထိုငျ​ခဲ့ရဖူးဘူး ပွီး​တော့…. ပရိတျ​သတျ​ မကျြ​စိဆံပငျ​​မှေးစူး​စမေဲ့ပုံစံ မလုပျ​ခဲ့ဘူး….။ဘီလီက​တော့… ဇငျ​ကွီး နဲ့ တုနျးကတဈ​ခါ ဇငျ​ကွီးနှုတိဆကျ​တာကိုအ​ရေးမစိုကျ​ပဲ လှညျ့​ထှကျ​သှားတဲ့ပုံစံဖွဈ​သှားခဲ့တယျ​ ပိုးမီ နဲ့တဈ​ခါ… ရှုံးတဲ့သူကိုနှဈ​သိမျ့​မှုမ​ပေးပဲ အ​ပြျော​ကွီး​ပြျော​ပွီး ပိုးမီးကိုနဈ​သိမျ့​ရမှာထကျ​ ​ကြျော​ထကျ​​အောငျ​နဲ့မိုး မမွ ငျ​​လမေမွငျ​ အောငျ​ပှဲခံတဲ့ပုံစံဖွဈ​သှားခဲ့ပွနျ​တယျ​….။အဲ့ဒီမှာပဲ.. ဇငျ​ကွီး ရဲ့ ဖနျ​​တှေ ပိုးမီ ရဲ့ ဖနျ​​တှဟော… သားငယျ​ဖကျ​​ရောကျ​သှားတယျ​….။ပွီး​တော့ ဘီလီပုံစံ…. ပရိတျ​သတျ​ ​တျော​​တျော​မြားမြားဟာ သူ့မကျြ​နာ​ပေးကို လုံးဝသ​ဘောမကကြွဘူး Bottom ထိုငျ​ရရငျ​ပိုသိသာတယျ​…။တခွားသူ​တှကေ ခံစားခကျြ​​နောကျ​မလိုကျ​ပဲ ထိနျးထားနိုငျ​​ပမေဲ့… သူက မကျြ​စိပကျြ​မကျြ​နှာပကျြ​နဲ့ သူထှကျ​ရမှာစိုး ရိ မျ​​နတေဲ့ပုံစံ​ပေါကျ​​နတော ပွီး​တော့… သူမထှကျ​ရရငျ​ ပွိုငျ​ဖကျ​ကိုနဈ​သိမျ့​ရမှာထကျ​ ပွိုငျ​ဘကျ​ကို လဈြ​လြူရှု တာ​တှေ မြားလာ​တော့ ပရိတျ​သတျ​ ​တျော​​တျော​မြားမြား သတိထားမိလာတာပါ…။အနုပညာရှငျ​​ဆိုတာ ငါ​တျော​လို့ပရိတျ​သတျ​အား​ပတေားဆိုတဲ့ စိတျ​ကွီးဝငျ​လာပွီး… ပရိတျ​သတျ​အား​ပေးလို့ ငါဒီ​နေ ရာ​ရောကျ​တာ ကို​မသှေ့ာရငျ​… ကဆြုံးဖို့မြားပါတယျ​…။အနုပညာရှငျ​​ဘယျ​​လောကျ​​တျော​​တျော​ ပရိတျ​သတျ​ သ​ဘောမကတြဲ့လုပျ​ရပျ​လုပျ​ရငျ​ သူ​တျော​တာပရိတျ​သတျ​လကျ​ခံ လိမျ့​မယျ​ အား​ပေးမှာမဟုတျ​ပါဘူး….။အိုး​ဝေ အိုး​ဝေ